Sacdiyo waxa ay guuleysatay iydoo aan is gumeyn! | KEYDMEDIA ENGLISH
Sacdiyo waxa ay guuleysatay iydoo aan is gumeyn!
Sacdiyo, waxaa lagu xasuustaa, hadal jeedinteedii maalintaas iyo baaqii ay u dirtay dadka ka soo jeeda Muqdisho, ee ku addanaa in ay iska dul-qaadaan rajiimka Farmaajo, oo markaas muddo kororsi sharco darro ah u dig iyo dab lahaa kaasoo ugu danbeyn fashilmay.
MUQDISHO, Soomaaliya – Xildhibaan Sacdiyo Yaasiin Xaaji Samatar, ayaa loo doortay xilka Guddoomiye Ku-xigeenka 1-aad ee Golaha Shacabka Baarlamaanka JFS, kadib markii ay wareeggii 2-aad ee tartanka ka adkaatay, Xildhibaan Maxamed Cali Cumar (Caanonuug).
Xildhibaan Sacdiyo Yaasin Xaaji Samatar ayaa heshay 137 cod halka musharaxii la tartamayay oo ahaa Xildhibaan Maxamed Cali Cumar (Caananuug) uu helay 107 cod sida uu ku dhawaaqay Guddoomiyaha Guddiga Doorashada Guddoonka Golaha Shacabka.
Sacdiyo ayaa noqotay gabadhii ugu horeysay ee qabata jagada Guddoomiye Ku-xigeenka 1-aad ee Golaha Shacabka BJFS, taasina waxay muujinaysa dadaalkeeda iyo ka jawaabista baahida loo qabo in Haweenku metelaad wanaagsan ku yeeshaan hay’adaha dowladda.
Xildhibaan Sacdiyo, waxa ay qeyb ka ahayd, Xildhibaanno fara ku tiris ahaa, oo Feb 6, 2021, madaharaad ka dhigay gudaha xarunta Golaha Shacabka, [Vila Hargeysa], xilli Farmaajo, ka jeedinayay, qudbad uu ku xalaaleysanayay muddo kordhin uu damacsanaa xilligaas.
Xidhibaan Sacdiyo, waa halgamaa, shalay iyadoo Baarlamaanka ku cusub u bareertay inay mucaaraddo maamul xoog iyo xoolo ku aamusinayay Mucaaradka, waxayna dhamadkii sanadkii hore sheegtay in ay gurigeeda uga guurtay cabsi iyo cadaadis uu Farmaajo saaray.
18 March 2022, Keydmedia Online, ayaa qortay warbixin kooban oo ciwaankeedu ahaa, [Sacdiyo iyo Sanyare oo usha u haya Xildhibaannada Puntland] kadib markii maalintaas Garowe lagu dooray Xildhibaano ay ku jiraan, Cabdiladiif Muuse Nuur iyo Sacdiyo Samatar.
Kursiga ay ku fariisatay Xildhibaan Sacdiyo, waa kursiga uu u dig iyo dam laha eedeysane Fahad Yaasiin, waxaana si tartanka kursiga Guddoomiye ku xigeynka 1-aad uusan u adkaan, kuraastii Baarlamaan loo dhaafiyay Muudey, Bashiir Goobe, Dhalxa iyo Sheekhaalow.
Doorashadaan waxa ay muujineysaa in mabda’, mowqif ku sugnaashiyaha, adkeysiga, sal-adegga, go’aanka, ballanta iyo wajihidda runtu, ay tusaalooyin toolmoon u yihiin, Siyaasadda, isla-markaana aysan kobo-qaadidda iyo hadba-geed fariisugu, micno samyn.
Dhanka kale, Xildhibaan Cabdullaahi Cumar Abshirow, ayaa loo doortay Guddoomiye ku xigeenka labaad ee Golaha Shacabka ee Baarlamaanka JFS, 2022-2026, waxuuna afka ciida u daray xildhibaankii kursigaas hore ugu fadhiyay Cawad oo Farmaajo ku daaban.